Kufanotaura Kushambadzira Ongororo neFungaVine | Martech Zone
Kufanotaura Kushambadzira Ongororo neFungaVine
Muvhuro, Mbudzi 2, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chii chingave chiri Kudzoka paInvestment kana iwe ukakwanisa kuchinja yako musanganiswa wekushambadzira?
Uyu mubvunzo wekuti vatengi vakuru vane nzira dzakaomarara dzekutengesa (dzinoenzana pakati pevakawanda vemasvikiro) vanozvibvunza zuva rega rega. Tinofanira kudonhedza redhiyo online? Ndinofanira here kushambadzira kushambadzira kubva kuterevhizheni kutsvaga? Chii chichava chinokanganisa bhizinesi rangu kana ndikatanga kushambadzira online?
Kazhinji, mhinduro inouya kuburikidza nemakumi ezviuru ekuyedza uye akarasika ekushambadzira madhora. Kusvika ikozvino. Vatengesi vanga vachishandisa mashandiro epamberi kufanofungidzira mashandiro ekushambadza emangwana. Kune njodzi hombe dzakabatana neiyi semasvikiro matsva anowedzerwa nekufamba kwenguva. Iko kushandurwa kwemaschools kubva mupepanhau kuenda online ingori imwe diki muenzaniso. Kana iwe ukaenderera iwe wakasarudzika waunoshandisa usingashandise iwo online, iwe unenge usiri kusvika kune yakanyanya kugona. Muchokwadi, iwe unogona kunge uchingove kutambisa mari yako.
FungaVine yanga ichishanda pazviitiko zve "Ko kana" kweanoda kusvika makore gumi. Vatengi vavo vanoyevedza… Sunny Delight, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, uye Citrix Online.
ThinkVine inokwanisa kuita izvi kuburikidza neyakavhenekerwa mumiririri-based modelling system iyo yakanyatso kugadzirwa muma1940's. Nokunzwisisa zvikamu zvemusika izvo zvakatenga kubva kwauri kuburikidza neyese svikiro uye nekushandisa iyo modhi kune zvikamu mune mamwe masvikiro, ThinkVine inokwanisa kuvaka yekufungidzira modhi yekuti kushambadzira kwako kuchashanda sei mune mamwe maMidhi. Iyo chaiyo system.
Zviitiko zvinokudziridzwa neWatchVine zvinogona kushandiswa kwenguva yakareba, ipfupi-pfupi kune yekushambadzira-yezve chiitiko, uye chikamu-chakavakirwa pakushambadzira. ThinkVine inogona kutofanotaura mamiriro ekupedzisira… ko kana ukamira kushambadza zvachose!
Dzidza zvakawanda nekutora chigadzirwa cheThickVine's Kushambadzira Simulation uye Kuronga Software.
Kuzivisa zvizere: CEO Damon Ragusa neni takashanda naBruce Taylor we Praesage makore mazhinji apfuura kushandisa nzira dzakadaro kunanga kushambadzira tsamba. Damon akavaka akasimba manhamba emamodeli kubva kune vatengi ma profiles uye, tichishandisa yaBruce's automation, isu tinokwanisa kushandisa otomatiki kushandisa iwo mamodheru kune anotarisira dhatabhesi. Iko kunyorera kwainzi Prospector uye kwakashanda zvine mutsindo. Bruce akanyatsogadzirisa kunyorera pamusoro pemakore uye achiri kuishandisa kune akati wandei makuru ekushambadzira vatengi.
Tags: chokufenberapredictive analyticskufungidzira kushambadzirathinkvine
5 Ngano dzeSocial Media
Nov 3, 2009 pa3: 28AM
Doug, nderudzii rwekutenga nhoroondo iyo ThinkVine inoda kukwanisa kuita izvi? Vanogona here kuita izvi kukambani nyowani / yekutanga?
Mbudzi 3, 2009 na3: 57 PM
Ichokwadi inoda nhoroondo yenhoroondo. Ini ndinofungidzira kana vaine vatengi vakaringana, kuunganidza ma profiles kunogona kuitika. Kusava nechokwadi kuti vatengi vavo vanozokoshesa izvo, zvakadaro! Ini ndinofunga vanoshandisa pazasi 1 gore re data - ndinofunga maviri anokurudzirwa.